DAAWO SAWIRADA-Carruur farxadda ciidda darteed loo qeybiyay lacag. – Radio Muqdisho
DAAWO SAWIRADA-Carruur farxadda ciidda darteed loo qeybiyay lacag.
Munaasabad lagu weyneynayo ciidul Fitriga ayaa loo qabtay boqolaal carruur ah iyo Waalidiintooda oo si aad ah looga dareemayay Farxada Ciida.
Intii ay munaasabada socotay ayaa caruurtii iyo waalidiintii kasoo qeybgalay waxaa loo qeybiyay lacag uu gu talagalay Maamuylka Hotel Maleyka in looga faa’iideysto Ciidul Fitriga,waxaana sidookale ku sugnaa xaflada fanaaniin oo goobta key suoo bandhigay heeso Banaadiri ah.
Maxamed Jeylaani Iimaan ayaa sheegay in ujeedka lacagta loo siinayo carruurta ay tahay sidii looga farxin lahaa, munaasabadda ciida awgeed, waxaana uu intaa ku daray inay joogteen doonaan.
“Ciidii ugu horeysay ma aha ee hotelka aan ku qabano ,hadaa nahay maamulka Hotelka, ciidan waxaan ku bixinaa farxad macmacaan iyo lacag, taasoo lagu abaalmarinayo carruurta degan Degmooyinka, Xamar weyne, Xamar Jajab iyo Waaberi ciidan waxaan ku faraxsanahay inay ka soo qeybgalaan tiro badan, ciidii hore way kasii badneed bashqadaha lacagta aan carruurta ugu talagalnay ay kujireen waa sii siyaadinay, dadka markey soo bataan wixiina waala siyaadinaa Insha Allah”
Munaasabadan lagu qabtay Hotelka Maleyka ayaa qeyb ka noqoneysa farxada Ciidul Fitriga oo ilaa shalay si aad ah looga dareemayo gudaha magaalada Muqdisho iyo magaaloyinka kale ee dalka.
DAAWO SAWIRADA-Dhallinyaro wax ku soo bartay dalka Malaysia oo urur cusub sameystay.
DAAWO SAWIRADA-Madaxweynaha oo shacabka kula ciiday goobo ku yaalla magaalada Muqdisho “SAWIRRO”
DAAWO SAWIRADA-Madaxweynaha oo shacabka kula ciiday goobo ku yaalla magaalada Muqdisho "SAWIRRO"